ရေချိုးခေါင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အကြံပြုချက်များ - သတင်း - Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd
1. ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် အတွေ့အကြုံရှိ ကျွမ်းကျင်သူများကို ဖိတ်ကြားပါ။ တပ်ဆင်သည့်အခါ၊ ရေချိုးခန်းသည် မာကျောသော အရာဝတ္ထုများကို မထိမိစေရန်နှင့် မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ဘိလပ်မြေ၊ ကော်စသော မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အပေါ်ယံလွှာ၏ တောက်ပမှုကို မထိခိုက်စေရန် ကြိုးစားသင့်သည်။ ပိုက်လိုင်းအတွင်းရှိ အပျက်အစီးများကို ဖယ်ရှားပြီးနောက် တပ်ဆင်မှုကို အထူးဂရုပြုပါ၊ သို့မဟုတ်ပါက အသုံးပြုမှုကို ထိခိုက်စေမည့် ပိုက်လိုင်းအပျက်အစီးများကြောင့် ရေချိုးခန်းကို ပိတ်ဆို့စေမည်ဖြစ်သည်။
2. ရေဖိအားသည် 0.02mPa (ဆိုလိုသည်မှာ 0.2kgf/ကုဗစင်တီမီတာ) ထက်မနည်းသောအခါ၊ အသုံးပြုပြီးသည့်နောက်တွင်၊ ရေထွက်ရှိမှု လျော့နည်းသွားပါက သို့မဟုတ် ရေအပူပေးစက်ကို ပိတ်ထားပါက ၎င်းကို ထားရှိနိုင်ပါသည်။ ရေပန်း၏ ရေထွက်ပေါက်မှ အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားရန် ဖန်သားပြင်အဖုံးကို ညင်သာစွာ ဝက်အူဖြုတ်ကာ ယေဘုယျအားဖြင့် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမည်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် အတင်းအကျပ် ဖြုတ်ချဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ရေချိုးခေါင်း. ရှုပ်ထွေးသော အတွင်းပိုင်း ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် ဖြစ်သည်။ရေချိုးခေါင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်မဟုတ်သော အတင်းအကျပ် ဖြုတ်တပ်ခြင်းဖြင့် ရေချိုးခေါင်းကို မူလအတိုင်း ပြန်မရနိုင်တော့ပါ။
3. ရေချိုးကန်ကိုဖွင့်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ပြီး ရေပန်းဖြန်းခြင်းမုဒ်ကို ချိန်ညှိသည့်အခါ အလွန်အကျွံအသုံးမပြုပါနှင့်၊ ညင်သာစွာလှည့်ပါ။ ရိုးရာ faucet ပင်လျှင် များစွာအားထုတ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ ထောက်ရန် သို့မဟုတ် အသုံးပြုရန် လက်ရန်းအဖြစ် faucet လက်ကိုင်နှင့် ရေချိုးခန်းကွင်းကို အသုံးမပြုရန် အထူးဂရုပြုပါ။
4. သတ္တုပိုက်ကိုလည်းကောင်းရေချိုးခေါင်းရေချိုးကန်၏ သဘာဝအတိုင်း ဆန့်တန်းထားသော အခြေအနေတွင် ထားရှိသင့်ပြီး အသုံးမပြုသည့်အခါတွင် faucet ပေါ်တွင် ကွိုင်မကပ်ပါနှင့်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ရေပိုက်နှင့် faucet အကြားအဆစ်တွင် dead angle မဖြစ်အောင် သတိထားပါ။
လွန်ခဲ့သော:ရေချိုးပိုက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်းအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ